दैलेखमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालन हुँदै – मातृभूमी
दैलेखमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालन हुँदै
नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा पनि ‘स्वास्थ्य बीमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । जिल्लामा यही फागुन १८ देखि उक्त कार्यक्रम शुरू गरिने बीमा बोर्डले जनाएको छ । यसअघि प्रदेशका ८ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेको छ भने अब सल्यानमा मात्र शुरू हुन बाँकी छ ।
पहिलो चरणमा जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाबाट कार्यक्रमको शुरुवात हुनेछ । बीमा कार्यक्रम सम्बन्धित वडातहमै सञ्चालन गरिने नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कर्णाली प्रदेशका संयोजक अर्जुन पण्डितले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको असारसम्ममा जिल्लाका ९० ओटै वडातहमा कार्यक्रम लागू गरिसक्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
‘यस कार्यक्रम अन्र्तगत सबैभन्दा पहिला वडातहमा दर्ता सहयोगीलाई ३ दिनको तालीमको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘वडाका नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गर्दा तालीम प्राप्त व्यक्तिकहाँ दर्ता गर्नुपर्नेछ ।’ गरीबी दर धेरै रहेको र स्वास्थ्य, आर्थिक लगायत सूचकमा पछि परेको प्रदेशमा यस कार्यक्रमको महत्व र उपयोगिता धेरै हुने उनको भनाइ छ । दैलेखपछि सल्यानमा पनि यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
पण्डितका अनुसार बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन ५ जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रति परिवार रू. ३ हजार ५०० तिर्नुपर्दछ । त्यस्तै ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य थप रू. ७०० का दरले रकम तिर्नु पर्दछ । बोर्डका अनुसार ५ जनासम्मको परिवारले दैनिक १० रुपैयाँ जम्मा गर्दा १ वर्षका लागि तिर्नुपर्ने रकम जम्मा हुन्छ । बीमा कार्यक्रममा सहभागी बिरामी हुँदा वार्षिक रू. १ लाख सम्मको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएकाले प्रति सदस्य थप रू. २० हजार बराबरले अधिकतम रू. २ लाख सम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउनेछन् । ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क बीमा हुने र रू. १० हजारसम्म उपचार सेवाको व्यवस्था गरिएको छ ।